အကြွေစေ့စတိုးအသွင်အပြင် Kiddie စီး operated - Prize ကိုအရောင်းစက်များ | Arcade ရေး Simulator | ရွေးနှုတ်အားကစားပြိုင်ပွဲ | ကလေးများ Arcade အားကစားပြိုင်ပွဲ | ဂန္ထဝင် Arcade စက်များ | Mini ကိုပန်းခြံစီးနင်း
ခေါ်ရန်ပံ့ပိုးမှု +86 186 64633857
ဘတ်စကက်ဘော Arcade စက်
လက်ဝှေ့ Arcade ဂိမ်း
Arcade ရေး Simulator
Arcade Moto ပြိုင်ပွဲ
Arcade Prize ကိုဂိမ်းစီးရီး
ကလေးများ Arcade အားကစားပြိုင်ပွဲ
retro Arcade စက်များ
ကော့တေး Arcade စက်များ
ကော်ဖီ Arcade စက်များ
tabletop Arcade စက်များ
အကြွေစေ့ Kiddie စီး operated
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » အကြွေစေ့စတိုးအသွင်အပြင် Kiddie စီး operated
အဆုံးစွန်ကြီးလာကြတယ် Arcade ဂိမ်းစက်
အဘိဓါန် Manx- TT မော်တော် Simulator Arcade ပြိုင်ပွဲဆိုင်ကယ်
အကြွေစေ့စတိုးအသွင်အပြင် Kiddie စီး operated
Mini ကိုပန်းခြံစီးနင် Carousel – ပန်းဦးရစ်သရဖူကို Carousel
tabletop Arcade စက်
မစ္စ Pacman Galaga Pac က Man 60 ဂန္ထဝင် 80 ရဲ့ Arcade ဂိမ်း
60 တွင် 1 ကော်ဖီစားပွဲတင် Arcade စက်
အတူ Pinball Arcade ဂိမ်းစက် 66 အားကစားပြိုင်ပွဲ
Coin Operated Storefront Kiddie Rides isavery popular in arcade game centre, family entertainment centre, shopping mall, supermarket, စသည်တို့ကို,. Kiddy ride is one of our main product, with years production and export experience, we got CE certificate for overseas marketing. Win-Win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်!
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် For အကြွေစေ့စတိုးအသွင်အပြင် Kiddie စီး operated
ပုံစံ Mini Kiddie Rides
အချက် 3D Horse / 3D Motor / 3D Car
စွမ်းရည် 1 ကစားသမားများ
အားကစားပြိုင်ပွဲ 17 ဂိမ်းများတွင်ပါဝင်သည်
စွမ်းအား 100V-220V, 120W က
MOQ5အစုံ
1, 17 တွင် 1 video games be built-in!
2, In 3D game type, control steering wheel to selectagame, press “start”. (total 17 ဂိမ်းများ)
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး Options ကို
1, ဝင်လာသောပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း: all the materials including fiberglass, metal base, bearing,etc need to be inspected when receive.
2, အပြောင်းအလဲနဲ့စစ်ဆေးခြင်း: the assembled ride base need to do burn-in loaded test for three days. In addition, we have QC persons to inspect the producing processing such as the fiberglass protection method, wire connection, movement, စသည်တို့ကို .
3, ကိုလက်စသတ်ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးရေး: ချောထုတ်လုပ်မှုအပြီး, all rides need to be operated, and be played in random before packing.
4, ထုပ်ပိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: wooden frame, wooden pallet or wooden crate be chose by customers, to ensure the safe in transportation.
3D — 11″, 15″, 17″ or 19″ game LCD, the kids can play games in rocking(17 တွင် 1).
5, Kiddie စီးနင်း
6, Mini ကိုပန်းခြံစီးနင်း
2, အရည်အသွေးမြင့်ထိန်းချုပ်မှု. တစ်နှစ်ပြည့်စက်ရုံအာမခံနှင့်တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု!
6, 7*24 နာရီအွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှု!
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T / T, L / C, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, ကြားမှအာမခံပေးသောအပြင်လူ
ငွေပေးချေမှုအခြေအနေ 50% ကြိုတင်ငွေသွင်း, 50% စစ်ဆေးခြင်းပြီးနောက်ဒါပေမယ့်ပေးပို့မီ
ထုပ်ပိုး လေပူဖောင်းရုပ်ရှင် + ဆန့်ရုပ်ရှင် + သစ်သားဘောင် / သစ်သားသေတ္တာ
အာမခံချက် 1 year
Plush လျှပ်စစ်တိရိစ္ဆာန် Scooter
ကလေးများသည် Plush တိရိစ္ဆာန်စီးနင်း
ဘက်ထရီကလေးများ Zippy စီးနင်း
ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေးစစ်ဆင်ရေး Zippy စီးနင်း
ကွမ်ကျိုး LiFang အပန်းဖြေပစ္စည်း Co. ,, Ltd မှ. တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် 2014, LiFang ထူထောင်မတိုင်မီ, ကွမ်ကျိုး GongTai Kiddie စက်ရုံနှင့်ကွမ်ကျိုး Shisheng ဂိမ်းစက်စက်ရုံခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်စီး 2010 နှင့် 2013 လိုအပ်သလို.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအီရန်ဂန္ Arcade စက်တွေ features တွေပါစို့
မတ်လ 05, 2019
ဂန္ထဝင် Arcade စက်တွေပါဝါထည့်သွင်းစဉ်းစား
မတ်လ 04, 2019
ကျနော်တို့လုံးဝသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်, တိုက်ရိုက်စက်ရုံစျေးနှုန်း, Excellent ကအရည်အသွေးကို, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံဆွဲ. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ !
ကွမ်ကျိုး LiFang အပန်းဖြေနည်းပညာလီမိတက် © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုအသုံးအနှုန်းများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ